Gịnị bụ uru nke swiss CNC igwe tụnyere space akara lathe? - China Shandong New Ankai-Kitco
Gịnị bụ uru nke swiss CNC igwe tụnyere space akara lathe?
The swiss CNC igwe bụ nkenke nhazi akụrụngwa, na ọ nwere ike mezue mgbagwoju machining nke ụgbọala,-egwe ọka, mkpọpu ala, na-agwụ ike, atụ na atụ ihe n'otu oge. Ọ na-bụ-eji maka ogbe nhazi nke nkenke ngwaike na aro pụrụ iche ekara-abụghị ọkọlọtọ akụkụ.
N'ihi na Ọdịdị nke ahụ na-eje ije igwe dị iche iche site na omenala space akara lathe, na machining arụmọrụ na machining nkenke nke na-eje ije igwe dị elu karịa nke NC lathe. Were ihe mgbu na biaxial ndokwa nke a haziri ngwá ọrụ, nke ukwuu na-azọpụta nhazi okirikiri oge, mgbanwe oge usoro na ngwá ọrụ iji na igwe ngwá ọrụ site shortening mma, multi ngwá ọrụ ebe yitewere na eri mgbawa irè axial akpụ akpụ overlapping ọrụ, kpọmkwem spindle indexing ọrụ ugboro abụọ n'oge nhazi, na-ebelata agụụ oge. Mgbawa ọnwụ ngwá ọrụ na-arụ dị nnọọ oké mkpa na machining usoro nke spindle na workpiece clamping akụkụ. Ọ na-enye a siri ike nkwa maka mgbe nile machining ziri ezi. Na echiche nke obi igwe ahịa, 38mm bụ ya kasị ukwuu nhazi n'obosara, nke na-eme na-eje ije igwe enyene a oké uru na nkenke axis nhazi ahịa. Nke a na usoro nke igwe ngwaọrụ nwekwara ike-onwem na akpaka nri ngwaọrụ, nke ọfiọkde n'ụzọ zuru ezu akpaghị aka na mmepụta nke otu igwe ngwá ọrụ, na-ebelata ọrụ na-eri ihe na ihe ọjọọ na ngwaahịa na mmepụta usoro, na ike ga-eji na-emepụta nnukwu quantities nke nkenke aro akụkụ.
The machining arụmọrụ na machining ziri ezi karịa NC lathe kemgbe a qualitative itu ukwu, n'ihi na nke abụọ ndokwa ngwá ọrụ, ukwuu mbenata nhazi okirikiri oge, na oge agbanweta ngwá ọrụ na akụrụngwa ngwá ọrụ site shortening mma, multi ngwá ọrụ ebe yitewere ọrụ, na eri ịcha irè axial akpụ akpụ overlapping ọrụ, kpọmkwem spindle indexing ọrụ abụọ oge mgbe nhazi, na-aghọta na oge nkpirikpi. The ọnwụ ngwá ọrụ na-mgbe na machined na clamping akụkụ nke spindle na workpiece, nke ana achi achi mgbe nile nkenke nke machining ziri ezi. Ugbu a, kacha machining n'obosara nke obi igwe na ahịa bụ 38mm, na ya nwere a oké uru na nkenke axis nhazi ahịa. Nke a na usoro nke igwe ngwaọrụ nwere ike n'ụzọ na akpaka nri ngwaọrụ ghọta akpaka mmepụta nke a otu igwe ngwá ọrụ, ma belata ọrụ na-eri na ihe ọjọọ ọnụego nke ngwaahịa. Ọ bụ nnọọ adabara uka mmepụta nke nkenke aro akụkụ.
Post oge: Ka-02-2018